Featured Blog Posts – January 2015 Archive (9)
साँच्चै हामी कहाँ छौँ !
डडेल्धुराबाट डोटी आइपुगेका थियौँ र सिलगढीमा रहेका एफएम-रेडियोका साथीहरुसंग बिहान एकछिन भेटघाट गर्न भनेर त्यसतर्फ जाँदैथियौँ । सिलगढी बजारको साँघुरो गल्ली हुँदै जाँदा शैलेश्वरी मन्दिर नजिकै एकजना महिला भेटिइन् । सायद तल बजार झर्दै थिइन् क्यार ! काखमा सानो नानी पनि देखेँ । त्यो पनि माछा मार्ने जालले छोपिएको अवस्थामा ।
तस्विरमा रहेको यो दृष्य देखेर तपाई अचम्ममा नपर्नुहोला । यो बालकको सुरक्षा कवच रहेछ उनीहरुको बुझाइमा । तर मेरो मनमा चलिरहेको…
Added by Kp anmol on January 29, 2015 at 3:00pm — No Comments
बढ्दो घरेलु हिंसा : कार्यन्ययन भएन कानुन
‘श्रीमानको पिटाईबाट मेरो नौ महिनाको बच्चा खेर गयो । मलाई घरमा पनि बस्न दिएका छैनन् । प्रहरी प्रशासनले मेरो पीडामा चासो दिँदैन । मैले कहाँबाट न्याय पाउने?’ यो प्रश्न हो बाह्रविसे-९ की अनिता श्रेष्ठको । श्रीमानले दोस्रो विवाह गरेपछि आफुले थुप्रै हिंसा खेप्नुपरेको उनले सुनाईन् । ‘मलाई श्रीमानले, घरपरिवारले मानसिक र शारिरिक यातना दिने गरेका छन्', उनले भनिन्-‘श्रीमानले रक्सी पिएर मलाई पिट्थे ।’ उनी एक दशकदेखि घरेलु हिंसा सहँदै आएकी छिन् ।
श्रीमान र परिवारको हिंसा सहन नसकि उनले दुई…
Added by Sundar Shireesh on January 29, 2015 at 12:30pm — No Comments
सार्बजनिक सुनुवार्इलाई मर्यादित बनाऔं
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकका नागरिकहरु स्वतन्त्र तवरले आफ्ना अभिव्यक्तिहरु अभिव्यक्त गर्न चाहन्छन् । यसरी आफ्ना अभिव्यत्तिहरु नागरिकले बिभिन्न तवरले राख्न सक्दछन् । कसैले गरेको राम्रो कार्यको खुलेर प्रशंसा गर्न सक्दछन् भने गलत कामका बिरुद्ध कन्दनी कसेर बिरोध पनि गर्न सक्दछन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलकका नागरिकहरुको अधिकार पनि हो आफुलाई लागेका कुराहरुमा खुलेर बोल्न पाउनु । पछिल्लो समयमा यो अधिकार जनताले प्रयोग गरेको पाईन्छ । लामो समय देखि तानाशाही प्रबृतिको रुपमा जरो गाडेर…
Added by Namaskar Shah on January 24, 2015 at 11:00pm — No Comments
कर्णालीको सडक ‘मृत्यु रेखा’
कर्णालीबासीको आशा थियो । सरकारको प्रयास थियो, कर्णालीमा सडक पुर्याउने । तर विभिन्न चुनौतिहरु थिए । ती चुनौतीका पहाडहरु पन्छ्याउन त्यति सजिलो थिएन । कर्णालीबासीको आशा र त्यहाँको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले वि.स.२०५९ मा नेपाली सेनालाई कर्णालीका केही अप्ठेरा पहरामा सडक निर्माणको जिम्मा दियो । सेनालाई जिम्मा दिइएको कालिकोट खण्ड सबैभन्दा ठूलो चुनौति थियो । सेनाले कालिकोट क्षेत्रको सडक निर्माण कार्य करिब चार वर्षमै पूरा गर्यो ।
जसोतसो वि.स.२०६४ सालमा जुम्लासम्म गाडि…
Added by Khem Raj wali (awichhinna) on January 24, 2015 at 7:30am — No Comments
मानवशास्त्र,भौतिकवाद र समाज विकास
मानव सभ्यताको विकासको क्रममा लोग्ने मानिसलाई मात्रै मानवशास्त्रका विषयवस्तुका रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ, तर ८० को दशक पछि त्यो विस्थापित हुँदै मानव भन्नाले पुरुष र महिला दुबैको हकमा लागु हुन थाल्यो ।
मानवशास्त्र पुरै मानव जीवन र जगतलाई बुझ्ने गरी परिभाषित हुनु पर्ने मान्यता अघि बढ्दै जाँदा त्यसका दृष्टिकोणमा समेत परिमार्जन हुँदै आएको देखिन्छ । जसलाई समग्रवादले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
Added by Basant Sharma on January 16, 2015 at 1:00pm — No Comments
एक तमासले म सुतेको बेड हल्लिन थाल्यो । एकछिन त चालै पाईन के भयो भनेर । के भयो भनेर थाहा पाउनलाई उठ्न खोजे, अँह पटक्कै उठ्न सकिन । अघिसम्म एकतमासले बेड हल्लिएको थियो । अब पुरै घर हल्लिन थाल्यो । जताततैबाट मान्छेहरुको हल्ला, खल्ला, चिच्याहट सुनिन थाल्यो । आफुलाई बेडबाट उठाउने हरसम्भव प्रयास गरे तर सक्दै सकिन । कोल्टे फर्किन खोजे तै पनि सकिन ।
उठ्न नसके पनि के भएको हो भनेर हेर्न खोजे आँखाहरु बन्दको बन्द नै भयो । मन एकदमै डराईरहेको थियो । जान्न मन थियो के भैराछ भनेर तर जति प्रयास जति…
Added by sabita Acharya on January 8, 2015 at 10:30am —2Comments
लोग्नेमान्छे, आइमार्इमान्छे, परिवार र समाज
‘लौ छोरो भयो । अब यसले परिवारको बिडोँ थाम्ने भयो ।’
जन्मने बित्तिकै उसको काम-कर्तव्यको घोषणा हुन्छ । परिवारमा हर्षाेल्लासको वातावरण छाउँछ । मानौ कुनै निकै नै ठूलोउपलब्धी हाँसिल गरेको झै सबैले फलानाले छोरा पायो भनेर गाउन थाल्छन् । जन्मदिने आमाले पनि राम्रो स्याहार पाउँछे ।
छोरो त झन् भुइँमा खुट्टा टेक्नै पाउन्न, एकपछि अर्को काखमा राख्नेको कमी हुँदैन । परिवारका सबै सदस्य भन्दा मिठो मसिनो उसकै थालमा हुन्छ ।
बामे सर्दै जाँदा र तोते बोली निस्कँदै जाँदा उसका हरेक साना भन्दा साना…
Added by Raman Paneru on January 7, 2015 at 10:30pm — No Comments
Added by MeroReport on January 7, 2015 at 3:00pm — No Comments
नयाँ नेपाल, पुरानो शिक्षा प्रणाली !
नेपालमा अहिले राजनीतिक परिवर्तनको खाका कोर्ने क्रम जारी छ । अपेक्षा गरिए भन्दा निकै लामो समय लागेकाले पनि संविधान निर्माणको सत्प्रयासले मूर्तता पाउला भन्ने कमैले मात्र अनुभुति गरिरहेको स्थिती छ । सबैलाई आफ्नै बुँदाहरु संविधानमा पार्नमा मात्रै ध्यान छ । जनचाँसो भन्दा पनि दलगत मुद्दाहरु र दलगत दम्भहरुले प्रकृया अड्काएर राखेको छ । त्यसै क्रममा मलाई पनि मेरो बर्गको केही ऐजेण्डाहरु…
Added by Raman Paneru on January 2, 2015 at 7:01pm — No Comments